အရှေ့တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ: နမူနာ မင်္ဂလာ နာမည် ပေးနည်း
မြန်မာသက်္ကရာဇ် ၁၃၆၆ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၄)ရက် ၊ခရစ်နှစ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက် ၊အင်္ဂါနေ့ ၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ် ၀၀ စက်္ကန့် အချိန်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးဖွားသော ဇာတာရှင် သတို့သမီးးငယ်အား မှည့်ခေါ်သင့်သော မင်္ဂလာနာမည် -
မွေးနာမ် အင်္ဂါ နှစ်ဆင့် တွဲဖက်မှည့်ခေါ်သောနာမည်
. ဆုလဲ့စန်္ဒီ . စန်္ဒာလင်းဩ . စုယူဇနာထက်
. စုလဲ့နန်္ဒာ . စုစုသီရိ . ဆုလဲ့သစ်္စာ
. သဲသျှားထူး . ရတနာထက်ထက် . စိန့်ဟန်နီထူ့း
. သီရိစန်္ဒာ . ကြိုင်သီရိရွှေစင် . သဲဆုထက်
. အမရာစိမ့်စိမ့်သူ . သည်းသျှားထူး ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွှေးချယ်ပေးနိုင်သည်။
““ဘ၀တစ်သက်တာ ဆောင်ရန်ရတနာ နှင့်ယတြာ””
နေအိမ်၊ အိပ်ခန်း၊ အလုပ်ခန်းတို့ကို ၄င်းအရပ်သို့ မျက်နှာမူပေးပါ။
တော်များအား ဆန်၊ဆီ၊ဆေး၊ဆားဇီးယို၊ ဇီးဖျော်ရည်တို့ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ဇာတာရှင်
Labels: မင်္ဂလာ နာမည်ပေးနည်း